फस्टाउँदै सामूहिक कृषि व्यवसाय - Chautari Post Online
फस्टाउँदै सामूहिक कृषि व्यवसाय
बेझाड। प्रदेश नं. ५ सरकारले सामूहिक रुपमा कृषि व्यवसाय गर्न रामपुरका दुई सहकारीलाई अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ ।
उक्त सहयोग रकमबाट समृद्धि बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारीले रामपुर नगरपालिका–३ स्थित कीर्तिपुरमा बेमौसमी तरकारी खेती शुरु गरेको । सहकारीमा आबद्ध पन्ध्र जना युवाले अनुदान पाएपछि अहिले व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती शुरु गरेका हुन् ।
गएको वर्ष मात्र उखु खेतीबाट करीब साढे चार लाख बराबरको कारोवार गर्न सफल भएको छ । रामपुर नगरपालिका क्षेत्रमा समूहमा लगाइएको सामूहिक उखु खेतीमा अहिले धेरैको आकर्षण बढेको छ ।krishipatrika
Prevकिन चाहिन्छ काउन्सिल ?
Nextअख्तियारको छानविनकाे दायरामा पर्याे पत्रकार महासंघको भवन